လိုသူတွေ သုံးဖို့အတွက် MASK တွေ ချုပ်ပေးနေတဲ့ မေတ္တာရှင် ကျောင်းဆရာမများ | CeleTrend
ပရိသတ်ကြီးရေ တစ်ခါသုံး Mask လေးတွေက ခဏခဏဝယ်သုံးဖို့ အဆင်မပြေသူတွေ ရှိပါတယ်…ဒါကြောင့် အဝတ်နဲ့ ချုပ်ထားတဲ့ mask လေးတွေကို သုံးကြသူတွေလည်း ရှိကြတာ ပရိသတ်ကြီးတို့လည်း အသိပါ….ပြန်လျှော်ပြီး သုံးလို့ရတာကြောင့် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာတာကြောင့်လည်း ဖြစ်မှာပါ….
ခုတော့ အဲလို အဝတ် Mask လေးတွေ လိုနေသူတွေအတွက် လှူလို့ပေးလို့ရအောင် မေတ္တာရှင်ကျောင်းဆရာမတွေစုစည်းပြီး Mask လေးတွေ ချုပ်ပေးနေတာရှိပါတယ်…
တကယ့်ကိုလေးစားဖို့ကောင်းတဲ့ ဆရာမတွေပါ…သူတို့တွေကတော့ ကော့ကရိတ် မြို့ အထက ၁ ကျောင်းအုပ်ကြီး နှင့်အိမ်တွင်းမှုအဖွဲ့ ဆရာမ များ မျက်နှာဖုံးနှာခေါင်းစည်းများ ချုပ်လုပ်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်…ဒါကြောင့် မေတ္တာရှင် ဆရာမကြီးတို့ကို ပရိသတ်တို့ကလည်း ဂုဏ်ပြုစကားလေးတွေ ဆိုခဲ့ကြပါအုံးနော်..
Source Khin Aye Mar
ပရိသတျကွီးရေ တဈခါသုံး Mask လေးတှကေ ခဏခဏဝယျသုံးဖို့ အဆငျမပွသေူတှေ ရှိပါတယျ…ဒါကွောငျ့ အဝတျနဲ့ ခြုပျထားတဲ့ mask လေးတှကေို သုံးကွသူတှလေညျး ရှိကွတာ ပရိသတျကွီးတို့လညျး အသိပါ….ပွနျလြှျောပွီး သုံးလို့ရတာကွောငျ့ ကုနျကစြရိတျသကျသာတာကွောငျ့လညျး ဖွဈမှာပါ….
ခုတော့ အဲလို အဝတျ Mask လေးတှေ လိုနသေူတှအေတှကျ လှူလို့ပေးလို့ရအောငျ မတ်ေတာရှငျကြောငျးဆရာမတှစေုစညျးပွီး Mask လေးတှေ ခြုပျပေးနတောရှိပါတယျ…
တကယျ့ကိုလေးစားဖို့ကောငျးတဲ့ ဆရာမတှပေါ…သူတို့တှကေတော့ ကော့ကရိတျ မွို့ အထက ၁ ကြောငျးအုပျကွီး နှငျ့အိမျတှငျးမှုအဖှဲ့ ဆရာမ မြား မကျြနှာဖုံးနှာခေါငျးစညျးမြား ခြုပျလုပျခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ…ဒါကွောငျ့ မတ်ေတာရှငျ ဆရာမကွီးတို့ကို ပရိသတျတို့ကလညျး ဂုဏျပွုစကားလေးတှေ ဆိုခဲ့ကွပါအုံးနျော..